ဖူးနုသဈ: ဆငျကြားပေါ၏ တခွားသော အကွောငျးမြား
Posted by ZT at 2:35 AM
လာဖတျသှားပါတယျ၊ ဗမာပွညျအကွောငျးလေးတှလေညျး အလဉျြးသငျ့သလို ရေးပါဦးနျော။ :)
အကို စာတွေဖတ်ရင် အမြဲတစ်မျိုး မဟုတ်တစ်မျိုးဗဟုသုတရတယ် ။
စာအရေးအသားလဲကောင်းတယ် ။ အမြဲစောင့်ဖတ် ဖြစ်တယ် ။ အသစ်တွေ.တော့ ပျော်ပီးလာဖတ်သွားတာ။
ဗဟုသုတ၇ပါတယ်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရေ. ပိုစ့် အသစ်တွေ မတွေ့ ရတာကြာနေလို့ 
Please post more bro.
I like all your posts and give me lots of knowledge.
Nice articles thx for shearing ur knowledge..plez write more..support u :)